Mhumhi nhema: Gómez-Jurado's nyowani ine simba uye yakadzama mhosva yenyaya | Current Literature
John Ortiz | 21/11/2021 17:22 | Vanyori, Novela, Nhema nhema
Mhumhi nhema (2019) ibhuku rechipfumbamwe nemunyori weSpanish Juan Gómez-Jurado uye chikamu chechipiri chinoratidza mutikitivha Antonia Scott semutambi mukuru. Mamwe mabhuku maviri ane nyeredzi muongorori ambotaurwa nemumwe wake, Inspector Jon Gutiérrez, Dzvuku Mambokadzi (2018) uye White mambo (2020).
Iyi trilogy yakashandura munyori weMadrid kuita mumwe wevanonyanya kuzivikanwa varatidziri vehutsotsi muSpanish nhasi.. Iro ibhuku rengano rakakurumbira zvikuru, ndinoonga—kunze kwaGómez-Jurado amene—kuzvinyoreso zvaDolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi naCarmen Mola, nokuda kwokududza zvishomanene.
1 Munyori uye novel yake
2 Black wolf analysis
2.1 Roti nevatambi vakuru
3 Kugamuchira kwakakosha
3.1 Ko bhuku rehutsotsi inyaya inotongwa nevakadzi here?
4.1 Basa rakatanhamara mumagazini, redhiyo uye terevhizheni
4.1.1 Zvichangoburwa mabasa
4.2 Basa rakanyorwa
4.2.1 Runyoro rwakakwana rwemanovhero ake
Munyori uye novel yake
Gómez-Jurado akakumbira kuti pasave neanotarisisa abudiswe kana ruzivo rwune chekuita nezviri mubhuku rake riburitswe munhau. Naizvozvo, chero kuedza pachidimbu kunopesana nechikumbiro ichocho. Zvisinei, hongu inogona kutsanangurwa kuti Mhumhi nhema seanogwinya, anotyairwa nehunhu ane hudzamu hwepfungwa hunodiwa hwenyaya yakanaka yehutikitivha.
Pamusoro pe, munyori akaberekerwa kuMadrid anowedzera madiki anogara aripo -Mas, kwete kuwandisa- yekusekesa kunobatanidza zvakakwana nekunangana kwese kwese muchinyorwa. Pamwe kuseka uye kuseka pakati pekunyengedza kunomiririra kubata kwepakutanga kwerondedzero ine simba yemunhu wechitatu.
Analysis of Mhumhi nhema
Roti nevatambi vakuru
Rondedzero iyi inotenderera nekuferefeta kwakaitwa nemutikitivha Antonia Scott nemumwe wake Jon Gutiérrez.. Vaviri ava, kunyangwe vaine hunhu hunopesana, musanganiswa unoshanda kana zvasvika pakugadzirisa kuuraya kwakaoma-kugadzirisa. Kune rimwe divi, mukadzi mudiki pachimiro asi akakura mukutsunga, haatye chero munhu.
Pane kudaro, iye murume wechiBasque ane muviri wakakura uye hunhu hwakanaka. Pakutanga kwebhuku, chiito chinoenda kunzvimbo mbiri. Kune rimwe divi, mutumbi wawanikwa murwizi rweManzanares (Madrid). Mukufanana, muMalaga mumwe mukadzi akapondwa mukati meshopu. Kuzivikanwa kweiyo yekupedzisira ndeyekuti, sezviri pachena, mufi aive chinangwa cheRussia mafia.
Munyori ane ruzivo rwese anoshandirwa na Juan Gómez-Jurado anokurudzira muverengi kuti anyure mumamiriro ezvinhu anowanikwa nevatambi. Rudzi urwu rwemunyori runotibvumira kuti tipinde mupfungwa dzevanopikisa: vanofunga sei, chikonzero chezviito zvavo, mavambo emanzwiro avo ... Zvose izvi zvinogadzira kuverenga kunokwanisa kuita kubva papeji yekutanga.
Pamusoro pezvo, nhaurirano dzeinovhero ndeyechokwadi uye dzakanyatsotsanangurwa, izvo zvinopedzwa nemagwaro akanakisa anoratidzwa nemunyori muzvirongwa. Mukuwirirana, tsananguro dzehutsotsi zvine hungwaru pamwe chete nemareferensi emashandiro emasangano akazvipira kutengesa zvinodhaka. pamahombekombe eAndalusian.
Mhumhi nhema Yave iri novel yakaverengerwa shanu (yakanyanya) uye nyeredzi ina paAmazon mu61% uye 28% yeongororo, zvichiteerana. Pamusoro pe, zvirevo papuratifomu yakanangwa uye pane mamwe maportal akatsaurirwa kutsoropodza zvinyorwa anotaura nezve nyaya ine mhepo, izere nekukahadzika uye kudzika kwepfungwa kunoshamisa.
Ko bhuku rehutsotsi inyaya inotongwa nevakadzi here?
Nharo dze Mabhuku ekutanga aGómez-Jurado vakafananidzwa neavo vaDan Brown nekuda kwekupindirana kwenyaya dzekurangana, dzezvematongerwo enyika uye dzechitendero. Nenzira imwecheteyo, Izvo hazvidzivisike kubatanidza Antonia Scott nevaratidziri vebhuku rehutsotsi raDolores Redondo., Carmen Mola kana Antonio Mecerro, pakati pevamwe. (Vose vakadzi vakangwara vane hunhu hwakasimba.)
Zvechokwadi, Mhumhi nhema inosimbisa maitiro azvino ebudiriro yekupepeta anomiririrwa neSpanish matsotsi manyoro ane varatidziri vechikadzi. Hazvishamise kuti mavara akaita saAmaa Salazar (Redondo) kana Elena Blanco (Mola) akawana nzvimbo yakakosha pakati pevateveri vemapurisa anonakidza. Zvechokwadi Scott ariwo chikamu cheboka iroro rakasarudzwa.
Juan Gómez-Jurado chizvarwa cheMadrid. Akazvarwa musi wa16 Zvita, 1977. Muguta guru reSpain Akawana dhigirii rake muRuzivo Sayenzi, kunyanya kuECU San Pablo University. Iyi yakavanzika imba yekudzidza inzvimbo inotongwa pasi pemirairo yeCatholic uye inonzi yeChristian humanism.
Ideology yedzidziso yemunyori weMadrid inoonekwa mumabhuku ake ekutanga, kunyanya mubhuku rake rekutanga, Mushori waMwari (2006). Panguva iyoyo, mutori wenhau aive atoshanda kune akasiyana siyana media, kusanganisira Radio España, Canal + uye Cadena COPE.
Basa rakatanhamara mumagazini, redhiyo uye terevhizheni
Munyori weIberia akabatana nemagazini akasiyana-siyana emunyika nekunze. Pakati pavo: Chii chekuverenga, Nyora pasi y New York Times Bhuku Rekuongorora. Zvakaenzana, anozivikanwa zvikuru nekuonekwa kwake paredhiyo neterevhizheni dzakasiyana siyana. Chimwe chezvakakurumbira chave chiri chikamu "Vanhu" -pamwe chete naRaquel Martos - chechirongwa. Julia pamhepo naOnda Cero (2014 - 2018).
Saizvozvo, Gómez-Jurado anga achifarirwa nevateereri veSpanish nekuda kwemapodcasts Wemasimbaose (pamwe chete naArturo González-Campos, Javier Cansado naRodrigo Cortés) uye Heano makava. Kana iri nhepfenyuro yeterevhizheni, kutaridzika kwavo mukati Iyo seriotes yeAXN uye muchirongwa chezhizha chevatambi vemafirimu cinemascopazo (2017 uye 2018).
Presenter of Iyo inobuda capacitor muLa 2, chirongwa chenhoroondo-tsika zvemukati (2021)
Mumwe munyori-pamwe chete nemukadzi wake, Dr. muChild Psychology Bárbara Montes-yevadiki akatevedzana Amanda Nhema
Muna 2021, akasaina chibvumirano neAmazon Prime chikuva kuti ave musiki wezvakasarudzika zvemukati zvemhando.
Nyaya yechipiri naJuan Gómez-Jurado, Chibvumirano namwari (2007), yakamiririra bhuku rekutsaura padanho renyika nepasirese. mabvazuva Bestseller anogovera akati wandei emadingindira uye mavara anotsanangurwa mune yake Mushori waMwari. Zvisinei, Munyori weMadrid haasi nyanzvi mune inovhero, sezvo airatidza hunyanzvi hwake hwekusika nekupinda mune mamwe marudzi.
Humbowo hweizvi ndiro zita risiri remanyepo Iyo Virginia Tech Massacre: Anatomy yePfungwa Yakatambudzwa (2007). Saizvozvowo, yakabudirira kuburitsa zvinyorwa zviviri zvevana nevechidiki, alex mwana (5 mabhuku) uye Rexcatators (3 mabhuku). Mukuwedzera kune akateedzana Amanda Nhema, ine maviri akabudiswa kusvika nhasi.
Runyoro rwakakwana rwemanovhero ake
Chibvumirano namwari (2007)
Ngano yembavha (2012)
Chakavanzika Chakavanzika chaVaWhite (2015)
Mhumhi nhema (2019)
White mambo (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Mhumhi nhema
Nazim Hikmet. Mhemberero yekuzvarwa kwake. Nhetembo